WhatsApp ကို web QR ကုဒ်ကို | သင့်ရဲ့ PC ကိုတွင် Whatsapp ချတ်များ Get
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Whatsapp က်ဘ်ဖို့အတွက် QR Code ကို: သင့်ကို PC တွင် Whatsapp ချတ်များ Get
Whatsapp က်ဘ်ဖို့အတွက် QR Code ကို: သင့် PC ကို APK ကိုတွင် Whatsapp ချတ်များ Get
ကြှနျုပျတို့အားလုံး WhatsApp ကိုအကြောင်းကိုငါသိ၏။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့အများစုကနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသုံးပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့အများစုက၎င်း၏သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ် interface ကိုအဘို့ဤချတ် app ကိုမှအတော်လေးစွဲဖြစ်ကြသည်ပြောအမှန်တရားဆန့်ကြလိမ့်မည်။ 2017 ၏အဆုံးကိုဦးတည်, WhatsApp ကိုဘီလျံခန့် 1.5 ကျော်အသုံးပြုသူများကရှိပါတယ်။ ပိုပိုပြီးတစ်ဦးချင်းစီဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်စတင်နှင့်တကွ, developer များအတှေ့အကွုံanice နှင့်အဆင်ပြေတဦးတည်းလုပ်ကပို features တွေအတူတက်လာဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ WhatsApp ကိုက်ဘ် - တစ်ချိန်ချိန်ပြန်, WhatsApp ကိုတစ်အင်္ဂါရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်သုံးစွဲသူများက WhatsApp ကို web QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မှတဆင့်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် WhatsApp ကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သို့သော်ဤနေရာတွင်မှတ်သားရန်အရာသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောထုံးစံ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည်ပေမယ့်, ပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုသူများသည်ကရှုပျထှေးနိုငျပါတယျ။ ကျနော်တို့ကဆောင်းပါးထဲမှာနောက်ထပ်အပေါ်အသေးစိတ်အတွက်ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆွေးနွေးကြမည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ feature ကိုအသုံးပြုပြီး၏အားသာချက်ကိုသင် authentication ကို remember.The ရန်ရှိသည်မယ်လို့မဆိုစကားဝှက်မျိုး, pin ကို, အီးမေးလ်လိပ်စာ, သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအမည်တစ် QR တစ်ခုသို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ကုဒ် အသုံးပြု. ပြုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။
WhatsApp ကိုက်ဘ်ဖို့အတွက် QR Code ကိုကဘာလဲ?
ကျွန်တော်အမှန်တကယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှပေါ်မရယူမီကိုသိရန်အခြို့သောအမှုအရာ - တစ် QR ကုဒ်ကိုကဘာလဲ? ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်တစ်ဘားကုဒ်ကိုဆင်တူဒေတာ, သိမ်းဆည်းထားနိုင်မယ့် 2D ဘားကုဒ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ QR codes တွေကိုလူကြိုက်များသော Paytm, BHIM App ကို, WeChat, Mobikwik အတွက်နှင့်အခြားပေးချေမှု applications များအသုံးပြုကြသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတော်လေးလုံခြုံလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပင် WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူများ authenticate ဤ QR codes တွေကိုကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သူတို့ကို WhatsApp ကို Web ကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါကအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သူတို့ချတ်မြင်လည်းထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိမက်ဆေ့ခ်ျများ, မျှဝေသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်မီဒီယာ, နှင့်အမျှလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
WhatsApp ကို Web သည်ဖို့အတွက် QR Code ကိုစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
သငျသညျသတိရလျှင်သင်အစပိုင်းတွင်သင့်ရဲ့ WhatsApp ကိုအကောင့်ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ, သင်သာသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေး။ ဘို့အတည်ပြုထားတဲ့ OTP သို့မဟုတ်တစ်ခုမှာအချိန် Password ကိုပြုခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမအသုံးပြုသူအမည်, အီးမေးလ်လိပ်စာ, သို့မဟုတ်စကားဝှက်များကစားသို့ကြွတော်မူပြီးကတည်းကသင်မည်သို့ယခုလုံလုံခြုံခြုံတစ်ဦးကိုအလွယ်တကူ WhatsApp ကို Web ကိုရယူနိုင်မည်နည်း? ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့် QR ကုဒ်ကိုပြီးပြည့်စုံသောအဖြေကိုကြောင်းထွက်လှည့်!
ဒါက WhatsApp ကို server ကိုကသင်သည်သင်၏အကောင့်အားဝင်ရောက်နှင့်သင့်အသေးစိတ်ကိုပြသကြောင်းသိကြကူညီပေးသည်။ သင့်ရဲ့အပေါ် logged in ဝင်သောခံခြင်းအားဖြင့် WhatsApp ကို သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအကောင့်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူသင့်ရဲ့ PC မှာအတူတူပင်ချတ် retrieve နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စကားဝှက်သို့မဟုတ် entry ကိုရဖို့ရန်သော့ချက်အဖြစ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြုမူ။
သင့်ရဲ့ PC မှာ WhatsApp ကိုချတ်များသုံးစွဲခြင်း
ဝဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာကြည့်ရန် WhatsApp ကို:
ပထမဦးစွာ web.whatsapp.com အတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာကို browser နှင့်အဓိကဖွင့်လှစ်။
သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းတွင်, မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်ပေါ်မှာတည်ရှိသုံးစက်ပေါ် WhatsApp ကို app နဲ့ထိပုတ်ပါဖွင့်လှစ်။
အောက်ပါ dropdown ခုနှစ်, WhatsApp ကို Web ကိုထိပုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်သင်ကွန်ပျူတာ၏ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်ပြသဖို့အတွက် QR code ကို scan ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
ကင်မရာပေါ်တွင်စတုရန်းပျေါလှငျအကြားမှာရှိတဲ့ code ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးရန်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုအသုံးပြုပါ။
WhatsApp ကို Web ကိုအလိုအလျှောက်ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့် log သည်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်ကြွစွာဆက်လက်တည်ရှိဦးမည် - သင့်စမတ်ဖုန်းကနေသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာကနေဖြစ်စေ။
သင်သည်သင်၏ privacy ကိုသေချာစေရန်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလည်းအားလုံးသင့်ရဲ့ device မှနေ log out နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းပေါ်မှာတည်ရှိသုံးစက်ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ PC မှာ WhatsApp ကိုက်ဘ်ကနေ log out နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် WhatsApp ကို Web ကို Install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် WhatsApp ကို web application ကို install လုပ်ခြင်းဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သူတို့၏အရာရှိတဦးက်ဘ်ဆိုက်ကနေ download link ကိုရယူနိုင်သည် - whatapp.com/download ။ ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအစိမ်းရောင်ကို download button ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းသင်၏ desktop သို့မဟုတ် laptop ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာကို install ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါင်းလုဒ်ကျော်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ရန် file ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Installer ကိုအစီအစဉ်တွင်အဆင့်ကိုလိုက်နာပါ။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ရိုးရှင်းစွာ WhatsApp ကို desktop application ကိုစတင်ပါ။ သငျသညျကနေ log out သည်အထိ session ကိုတက်ကြွနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဤနေရာတွင်မှတ်သားရန်တစ်ခုမှာအရာသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို Windows 8 OS ကိုအထက်ပေါ်ပြေးလျှင် WhatsApp ကိုသာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ Mac အတွက်နှငျ့ ပတျသကျ. OS ကို Mac ကို OSX 10.9 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အခြားအ WhatsApp ကို QR ကုဒ်ကို
ယင်းအပြင် WhatsApp ကိုက်ဘ် QR ကုဒ်ကိုတစ်ဦးကကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ချတ်ဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြု, ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အခြားအ QR codes တွေကိုအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်။ ဤသည်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် WhatsApp ကို Group မှဖို့အတွက် QR Code ကိုများအတွက် WhatsApp ကို QR Code ကိုပါဝင်သည်။ ယခင်ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်အဆက်အသွယ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အဖြစ်မျိုးစုံတာဝန်များကိုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအဆက်အသွယ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ယခုအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဖို့အတွက် QR codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆုံးစွန်သော, WhatsApp ကို Group မှဖို့အတွက် QR Code ကိုတစ်ဦး WhatsApp ကိုအုပျစု join ဖို့အသုံးပြုသည်။ ဤသည် QR ကုဒ်ကိုကြောင်းအထူးသဖြင့်အုပ်စုတစ်စုဝင်ရောက်ရာမှမလိုချင်တဲ့အသုံးပြုသူများကိုရပ်တန့်ဖို့ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင်ကြီးမားတဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိအထူးသဖြင့်လျှင်, တစ်ဦးတော်တော်လေးအသုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖို့အတွက် QR ကုဒ်ကို၏နိဒါန်းနှင့်အတူ, access ကိုယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူကိုဖန်ဆင်းသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကိုလည်းအသုံးပြုသူများသည်အားနည်းချက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသတိပြုပါရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့သင့်စမတ်ဖုန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းမည်သူမဆိုသင့်ရဲ့ချတ်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဘယ်လောက်သူတို့ကလုပျနိုငျသလဲ ထိုအပိုအရေးကြီးတာကသင်မည်သို့သူတို့ကိုရပ်တန့်နိုင်သလဲ
Android အတွက် WhatScan App ကိုထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုများအတွက်ရေပန်းစား application ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တကမိုဘိုင်း app ထဲမှာ Whatsapp Web ကိုထင်ဟပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Google ကအဲဒီမှာမရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်ဒါ Store မှာ, ထိုကဲ့သို့သော applications များကိုထောက်ပံ့မထားဘူး, ဒါပေမယ့်တခြား APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပလက်ဖောင်းများတွင်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ပါသည် Play ။ သငျသညျဘယ်သူမှသင့်ကျောနောက်သို့သင့်ရဲ့ချတ် access လုပ်နိုင်သေချာချင်လျှင်, သင့်စမတ်ဖုန်းရဲ့ Whatsapp က်ဘ်အပိုင်းကိုသွားနဲ့ 'အားလုံးကွန်ပျူတာများထဲက Log in ဝင်ရန်' 'အပေါ်ထိပုတ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် logging, သင် (နှင့်အခြားလူတိုင်းအတွက်) နောက်တစ်ကြိမ်သင့်ဖုန်းမှဖို့အတွက် QR code ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မှန်မှန်ဤသို့ပြုသင့်ရဲ့ privacy ကိုထိန်းသိမ်းသည်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။
2 install လုပ်နည်း ...
Whatsapp ဖို့အတွက် QR Code ကို WhatsApp ကိုက်ဘ် Whatsapp က်ဘ်ဖို့အတွက် QR Code ကို